परिषद्काे इतिहासमा ब्यक्तिगत तलव बढाउने २ सदस्य सचिव, जसले सचिवकाे भन्दा धेरै खान्थे !
नेपाली खेलकुदको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि यतिबेला तीन जना ब्यक्तिको नाम सिफारिस भएको छ । संभवत सोमबारसम्म आगामी चार बर्षका लागि को सदस्य सचिव आउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । अब नयाँ सदस्य सचिवको तलवपनि…
क्रिकेटमा समयसँगै परिवर्तन भएकाे प्रविधि
विश्वमा आधिकारीक रुपमा क्रिकेट सुरुवात १८७७ मा भएको थियो । तर समयसँगै यो खेलमा प्रविधिको विकाश पनि भएको छ । क्रिकेटमा नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदा धेरै कुराको सहजपन भएको छ । पछिल्लो पटक इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इन्डिज विचको टेष्ट सिरीजमा नयाँ…
धर्म परिवर्तन गर्ने क्रिकेटरमा कृपालदेखि दिलशानसम्म !
हरेक खेलाडी उसको क्षमताका आधारमा चिनिन्छ । खेलाडीको कुनै जात र धर्महुँदैन भनिए पनि कतिपय सवालमा उनीहरुको समूदाय र धर्मका आधारमा पनि चिन्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । ठूला खेलाडीहरुले धर्म सम्प्रदायका विषयमा ठूलै कदम चाले पछि उनीहरुको करियरसँगै…
फुटबल इतिहासकै सर्वाधिक रातो कार्ड पाउने ‘शालिन’ ब्यक्तित्व
‘द बिस्ट’ अर्थात जनावर अर्थात पशु । यो उपनाम कोलम्बियन खेलाडी जेरार्डो बेदोयाको हो । जसले २० वर्षे ब्यावसायिक फुटबल करियरमा ४७ वटा रातो कार्ड पाएर कीर्तिमान बनाएका छन् । जुन कीर्तिमान उनले चाहेर बनाएका होइनन् । न त कुनै खेलाडीले यस्तो…
एक दिवसीयको डेब्युमै ६ विकेट लिने बलर एडवर्डस र रबाडा
एक दिवसीय क्रिकेट खेल्ने हरेक खेलाडीको चाहना हुन्छ । त्यसकालागि उनीहरुले धेरै नै मेहनत गरेका पनि हुन्छन् । कति खेलाडीहरु मौका पाउँदा सफल हुन्छन् भने कति खेलाडीहरु त्यतिकै हराएर पनि जान्छन् । अझ भन्ने हो भने पहिलो खेलमै शानदार प्रदर्शन…
खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा काँग्रेसको आपत्ति
मुक्तिबाबु रेग्मी । हालै कार्यान्व्यनमा आएको खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । नयाँ ऐन आउनु आफैमा सकारात्मक कुरा भएपनि ऐन भित्र रहेका केही प्रावधानहरु गलत मनासायका साथ आएको ठहर काँग्रेसको छ । हालै काँग्रेसले गठन…
नेपाल जस्ता देशलाई दुई बर्षमा दुई फरम्याटको विश्वकप खेल्ने मौका !
आइसीसीले यो बर्षको अक्टोबर नोभेम्बरमा हुने टी २० विश्वकप एक बर्षका लागि सारेको छ । यसले गर्दा २०२३ सम्मको विश्वकपको मितीमा फरक परेको छ । यो बर्ष हुने भनिएको टी २० विश्वकप २०२१ मा सरेको छ भने २०२१ मा भारतमा हुने भनिएको विश्वकप २०२२ मा सरेको…
बलुन डी याेर अवार्ड रद्द हुँदा ‘भिक्टिम’ भएका संभावित ६ खेलाडी
कोरोना भाइरसका कारण यो बर्ष हुने बलुन डी योर अवार्ड नहुने निश्चित भएको छ । कोभिड १९ का कारण उत्कृष्ट खेलाडीको यो अवार्ड नदिइने बताएपछि यो बर्ष यसको दावेदार मध्येका ६ जना खेलाडी जो भिक्टिम बनेका छन, उनीहरुका बारेमा कुरा गर्नेछौ । यो…
रियालकाे प्रशिक्षकका रुपमा जिदानकाे एभरेजमा १९ खेलमा एक उपाधि !
रियाल मड्रिडको प्रशिक्षकका रुपमा जिनेदिन जिदानले दोस्रो पटक ला लिगाको उपाधि जितेका छन । यतिमात्र होइन, उनले २०९ खेलमा ११ औं उपाधि जित्न सफल भएका छन । लोस ब्लाकोन्सको प्रशिक्षकका रुपमा जिदानको पोल्टामा हरेक १९ खेलमा एउटा उपाधि परेको छ ।…
बलात्कारदेखि घुष प्रकरणसम्मः फुटबलका विश्वचर्चित पाँच प्रकरणहरु
विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने र सबैभन्दा धेरै खेलिने खेल हो फुटबल । जुन कुरा बढी चर्चित हुन्छ, त्यहाँ विवाद पनि धेरै नै हुन्छ । फुटबलमा केही यस्ता प्रकरण भएका छन् जुन कसैले पनि बिर्सिन सक्दैन । यदी तपाईले कुनै प्रकरण विर्सिनुभयो भने आज हामी…